Nkọwa DCN | Yunke China Information Technology Limited
Igwe ojii nwere ọgụgụ isi
Data Center Gbanye
L3 + Gbanye
L3 Industrial Gbanye
Din-okporo ígwè Gbanye
Mfe Jikwaa Gbanye
100M na-abụghị PoE
1000M na-abụghị PoE
Wi-Fi ụlọ ọrụ
Ime ụlọ AP
SMB Access njikwa
Multi-isi Security Gateway
Ọgbọ Firewall na-esote Ọgbọ
Ngwọta Nchọpụta Campus
Data Center Network Ngwọta
ISP Network Ngwọta
Isi ụlọ ọrụ
DCN- Yunke China Ozi Teknụzụ Nwere Oke
Yunke China Information Technology Limited, dị ka enyemaka nke Digital China (nne na nna ụlọ ọrụ) Group (Stock koodu: SZ000034), bụ a na-eduga data nkwukọrịta ngwá na ngwọta na-eweta. Site na Lenovo, DCN ka emepere n'ime ahịa netwọkụ na 1997 na nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ nke "Ndị ahịa dabere na ya, Nchọpụta Teknụzụ na Ọrụ Mmasị".
DCN na-elekwasị anya n'ọhịa nkwukọrịta data na akara ngwaahịa zuru ezu, gụnyere Gbanwee, Ikuku, Router, Firewall Security na ọnụ ụzọ ámá, nchekwa, ọrụ CPE na igwe ojii. Na-aga n'ihu itinye ego na R & D, DCN bụ onye na - eweta ihe enyemaka IPv6, ụlọ ọrụ China mbụ meriri asambodo IPv6 Ready Gold na onye nrụpụta izizi merie Asambodo OpenFlow v1.3.
DCN na-enye ngwaahịa na azịza nye mba 60 + n'ụwa niile, ma guzobe ndị nnọchi anya na ụlọ ọrụ na CIS, Europe, Asia, America na Middle East. DCN na-enyere ndị ahịa aka nke ọma site na Mmụta, Gọọmentị, Ndị Ọrụ, ISP, Ọbịa, na SMB.
Dabere na mmepe nke onwe ha na ihe ohuru na-adigide, DCN na-aga n'ihu na-enye azịza netwọkụ na ngwaahịa nwere ọgụgụ isi, nke a pụrụ ịdabere na ya na nke jikọrọ ọnụ na ọrụ dị mma maka ndị ahịa
&Lọ R & D:
Adreesị: Nke 1068-3, Jimei North Avenue, Jimei District, Xiamen
Akụkọ banyere mmepe ：
Onyinye IPv6 zuru oke zuru ụwa ọnụ
Ẹkedori data center switches na-akwado virtualization atụmatụ; Ẹkedori akpa azụmahịa na-emeghe eruba mgba ọkụ na China; Nyere IPv6 ngosipụta CNGI oru ngo nke Chinese Academy of Sciences;
Inye nke 1.2 mgba ọkụ maka SDN na netwọk nke netwọk center nke Chinese Academy of Sciences; Ẹkedori data center mgba ọkụ ngwaahịa akara
Mepee igwe ojii igwe ojii kọwapụta ihe data etiti data na nso nso ụlọ; A malitere Dcnos7.0, ngwaahịa niile na-akwado usoro mmeghe; Ẹkedori SDN bara uru ngwọta maka eluigwe na ala
DCN abanyela na onf nzukọ na batches na China, nke izizi gafere asambodo izizi openflow 1.0
DCN bụ onye nrụpụta ụlọ izizi gafere akwụkwọ asambodo arụmọrụ OpenFlow V1.3
Edepụtara usoro mpempe akwụkwọ kachasị nke DCN nke ụwa 802.11ac panel AP wee biri nke ọma na Mpaghara Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Mpaghara.
Thelọ ọrụ ahụ malitere APS zuru ezu nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dabere na ọkọlọtọ 802.11ac WAVE2; mepụtara ọhụụ ugboro atọ iyi AP ngwaahịa wl8200-i3 (R2) iji zute ọnọdụ nnweta njupụta dị elu;
Ọgbọ ọhụrụ SDN chip based dolomite series cs6570 100g elu arụmọrụ data center mgba ọkụ ngwaahịa na-webatara. Imcloud Intelligent Cloud management platform v2.0 bidoro, nke na akwado ya
Tọrọ ntọala na 2008, nke dị na Beijing, o guzobela ngalaba nkwupụta ụtụ isi na Beijing na ngalaba Hong Kong. Ka ọ dị ugbu a, ọ nwere ọfịs na Changchun, Shenyang, Dalian, Zhengzhou, Hohhot, Shijiaz
Adreesị:Digital Technology Plaza, NO.9 Shangdi 9th Street, Haidian District, Beijing, China
Ekwentị: +86 400 810 9119
Ekwentị:+86 (10) 82707033
E-mail ahịa @ dcnglobal.com, dcnsales @ digitalchina.com
Hapu Ozi Gi